Ergaa Pireezidaantii | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Ergamaa fi Muldhata
Ergaa I/A Pireezidantii
Hooggansa MMWO Ammaa
Manneen Murtii Oromiyaa
Manneen Murtii Olaanaa Oromiyaa
Beeksisa Hojii Maxxansaalee Haaraa Odeeffannoowwan Waa'ee Keenya
Yeroon amma keessa jirru kun akka biyyaattis ta’e akka naannoo Oromiyaatti yeroo murteessaa dha. Yeroo gaaffiin dimookiraasii fi bilisummaa uummanni sagalee isaa ol kaasee itti gaafataa jiruu fi gaaffiin ummataa kun sosochii jijjiirama siyaasaa fi bulchiinsaa hordofsiisaa jiruudha. Gaaffiin uummatni keenya kaasee qabsaa’ee fi aarsaa itti kaffalee gaaffii siyaasaa qofaa miti. Gaaffii haqaa fi mirgaatis. Yerochi manneen murtii keenyaaf illee carraa gaggaarii fidee kan dhufe dha.
Gam- tokkoon, jijjiirama dhufaa jiru kana keessatti mootummaan sirna heeraa fi dimookiraasii mirkanessuuf murtii siyaasaa ciccimaa dabarsee hojjechaa jira. Murtiin gara dimookiraasiitti ceehuuf godhamu kun ol’aantummaa seeraatiin yoo hin utubamiin galma gahuu hin danda’u. Ol’aantummaan seeraa immoo bakka Manneen Murtii gartummaa fi loogii irraa walaba ta’an hin jirreetti milkaa’uu hin danda’u. Gam-biraatiin, uummanni kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa Manneen Murtii Oromiyaa kennaa turaniifi jiranirratti komii bal’aa kaasaa ture, kaasaas jira. Manneen Murtii keenyas tajaajila kennan fooyyeessuuf tattaaffii hedduu godhanis, jijjiirama bu’uuraa fiduu hin dandeenye. Haala amma irra jiraniin, gaaffii haqaa uummanni kaasu qixa gaafficha madaaluun deebisuuf gahumsa dandeettii fi naamusaa barbaachisu qabu jechuun nama dhiba.
Manneen murtii keenya keessatti rakkoo bal’aatu mul’ata. Sirni bilisummaa fi itti gaafatamummaa itti mirkaneessan hanga barbaadamu bu’aa qabeessa ta’aniiru jechuun hin danda’amu. Rakkoowwan naamusaa, malaammaltummaa fi dandeettii dhimmoota yaadeessoo fi xiyyeeffannoo addaa barbaadan dha. Bulchiinsi keessoo gaaromsuun hojii guddaa gaafata. Sirna qabiinsa fi bulchiinsa dhimmootaaa fi odeeffannoo, akkasumas gurmaa’insii fi bulchiinsi dhaddachaa fooyya’uu qabu. Hojiifi hojimaata manneen murtii tekinooloojiin deggaruun ammayyeessuun hedduu barbaachisa. Dhimmoota kan akka koorniyaa, koomunikeeshiinii, qorannoo, hojii jijjiiramaa fi kkf irratti xiyyeeffachuun jijjiirama barbaadnu galmaan gahuuf hedduu murteessoo dha.
Walumatti, Manneen Murtii bilisummaa guutuu fi ittigaafatamummaa ol’aanaadhaan hojjatan, ijaarsa sirna dimookiraasiif utubaa fi kabajama mirga namoomaaf ammoo wabii ta’an ijaaruuf jijjiirama hundee-qabeessaa fi hunda-galeessa fiduun murteessaadha. Rakkoowwan oliitti ibsaman hundeerraa hiikuuf sochii jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi bulchiinsaa naannoo fi biyya keenyatti deemaa jiru waliin akka Manneen Murtiitti of jijjiiraa deemuun dhimma barbaachisaa qofaa osoo hin taane, jijjiiramicha utubuu, lafa qabsiisuu fi fulla’iinsa akka qabaatu gochuu keessatti qooda bahachuutu nu irraa eegama.
Jijjiirama kana dhugoomsuuf toorawwan fi hojiiwwan xiyyeeffannoo fi tarsiimo’aa adda baasanii irratti hojjachuu dirqama ta’a. Haaluma kanaan gahuumsa fi dandeettii humna namaa keenya gabbisuu, sirna hooggansaa cimsuu fi bulchiinsa keessoo gaaromsuu, akkasumas naamusaa abbaa seerummaa dagaagsuu fi sirna itti gaafatamummaa cimsuu; walumatti qulqullina hojii abbaa seeummaa fooyyeesuu ni barbaachisa. Ergmaa fi qoodinsa aangoo, caaseffamaa fi gurmaa’insa manneen murtii keenya sakatta’uun irra deebiin ijaaruun dhimma murteessaa ta’a. Kana malees, hojimaataa fi sirna bulchiinsa keessoo qorachuun sirreessuun, akkasumas bulchiinsaa fi misooma human namaa fooyyessuu fi bu’aa qabeessa taasisuuf hojjatamuu qaba. Dhaqabamummaa fi qulqullina kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjatamuu qaba.
Kanaaf hawaasni manneen murtii yeroon kun yeroo murteessaa fi jijjiirama bu’uuraa gaafatu ta’uu hubachuudhaan mul’ataafi ergama Manneen Murtii galmaan gahuudhaaf miira ho’aa, kaka’umsa fi quuqama ol’aanaadhaan socho’uun kan isin irraa eegamu ta’uu isin yaadachiisuun barbaada. Hooggansi manneen murtii sadarkaa sadarkaan argamu, abbootiin seeraa, muudamtootni biroo fi hojjatoonji fi hawaasni hundi ciminaa fi yaada tokkoon hojjachuutu isinirraa akka isin irraa eegamu dhaamuun fedha.
Dhuma irratti, akkuma beekamu hojiin haqaa fi seeraa hojii mana murtii qofaan hojjatamu miti; sochii qofaa ofiin godhamuunis galma gahuu hin danda’u. Jijjiiramni hunde-qabeessa fi hunda-galeessa ta’e milkeessuuf degarsaa fi qindoomina qooda fudhattoota hedduu gaafata. Kanaaf, Manneen Murtii keenya qaamolee haqaa fi qooda fudhattoota hunda waliin qindoominaa fi atoominaan hojjachuu qabna. Carraa kanatti fayyadamee qaamolee dhimmi ilaalu waliin hojachuuf yaamicha dabarsuun fedha. Haqaaf haqaan hojjanna!!
GAMAAGGAMA RAAWWII HOJII MANNEEN MURTII OROMIYAA
DAMBIILEEN NAAMUSAA FOOYYA’ANII JIRU
“RIFOORMII FAKKEENYUMMAA QABU GAGGEESSAA JIRRAA” OBBO GAZAALII
Kora Hooggansa MMWO fi MMO
HARIIROO WAL-TUMSUU MMWO FI MMWBG
SIRNA KEESSUMMEESSA DABAREE ABBOOTII DHIMMAA (Queue Management System)
TAJAAJILA DEEGGARSAA SEERAA